Vhura-anokosha Dry Room System
VOC abatement hurongwa
NMP kupora hurongwa
Kushanda Principles pamusoro Dryair Products
Modes pamusoro Dehumidification:
Mhepo dzaserera kuti pazasi dova pfungwa, uye ipapo yaiitwa yakapfupikiswa mvura chinobviswa.
Nzira iyi ndiyo inoshanda pasi mugariro kuti dova ndeyekuti 8 ~ 10 ℃ kana kupfuura.
tsonyera atonhodze ivhu nyoro mhepo kusiyanisa unyoro.
Nzira iyi ndiyo inoshanda kana volume mhepo iri diki asi kwete yakakodzera mamiriro ezvinhu bhuku guru mhepo.
3. Liquid Absorção de Água dehumidification
Lithium chloride mhinduro pfapfaidzo inoshandiswa tibatsirwe unyoro.
Dova pfungwa inogona kuderedzwa kuti -20 ℃ kana zvakadaro, asi midziyo yakakura, uye Absorção de Água mvura inofanira kutsiviwa.
4.Wheel-mhando desiccant dehumidification
The zvedongo fibers ose akaiswa mushonga wokuuraya porous hygroscopic yomuchipatara vari muzvikamu wouchi-kufanana vamhanyi kuti kufefetedza.
The dehumidification mamiriro iri nyore, izvo zvinogona kusvika -60 ℃ zvichidzika kuburikidza chinokosha mubatanidzwa dova pfungwa.
Ndicho nzira dzakashandiswa Jierui.
NMP anomirira N-Methyl-2-Pyrrolidone
Sezvo NMP ane mukuru Kubika pfungwa uye pasi hwemvura kufurirwa pasi kwomuzvarirwo tembiricha inogona nyore yaiitwa yakapfupikiswa kuburikidza kutonhora pazasi kwomuzvarirwo tembiricha. Maererano yokuita Antoine, achishandisa ayo maitiro, kuzoita NMP zvinogona achiitiswa kutonhora (chero kuti mvura kupora chitsama ichiwedzerwa kana Dryer chiutsi gasi rine zvakawanda mvura).
Advantages ose VOC wevasungwa rotors:
1.High waivako & kunyatsoshanda
Kushandisa High silica zeolites neactivated carbons rakakura adsorption vanokwanisa anobvumira VOCconcentrator yedu flexibly kubata mhando dzakasiyana-siyana VOCs uye kushanda pasi akasiyana ezvinhu nokushanda.
2.Capability kwokubata VOCs dzakakwirira Kubika pfungwa
Carbon acho ane dambudziko kubata VOCs dzakakwirira Kubika pfungwa nokuda desorption tembiricha kwayo muganhu. Mukusiyana, hunhu hwedu zeolite rotors vane incombustible uye yakakwirira kupisa nemishonga, iyo inoita yedu VOC concentrator kushandisa adsorption mhepo dzakakwirira tembiricha.
VOC nyore polymerized ne Kupisa simba (semuenzaniso styrene, cyclohexanone, etc) anogona kurapika ne High-Silica zeolite.
4.Cleanability & activation kubudikidza nokupisa pakurapa chaiyo
zeolite yedu rotors kuburikidza calcining kwacho vauya zvose inorganic zvinhu kusanganisira namira. Clogging ari rotor chinhu kungazoguma pashure imwe nguva use.But, usanetseka !! The rotor iri wachika nenzira yakakodzera kubvisa vaunganidza dust.It kunyange nani kuti kwedu zeolite rotor kunogona kuita kubudikidza Kupisa kurapwa maererano nemamiriro ezvinhu.
Typical Applications ose VOC wevasungwa rotors:
Possible Facility / Product mutsetse pasi VOCs kudzora
Automotive / Parts mugadziri Painting dumba Toluene, Xylene, Esters, Alcohols
Steel fenicha Muiti Painting dumba, hovhoni
Namira / Magnetic tepi mugadziri Bemhapemha muitiro, Cleaning chikwata Ketones, Mek, Cyclohexanone, Methylisobutylketones, etc.
Chemicals Oiri, Reactor Zvinonhuwirira Mahydrocarbon, Organic acids, Aldehydes, Alcohols
Chakaita zvokugadzirwa nebwe / guruu Maker Mapurasitiki, Plywood kugadzira muitiro Styrene, Aldehydes, Esters
Semi-kondakita Cleaning chikwata Alcohols, Ketones, Amines
Inobatsira dova pfungwa kutendeuka tafura:
° Cdp g / makirogiramu ° Fdp Gr / LB